बेइजिङमा किचेन कमान्ड
चिनियाँ राजधानी सहरको ‘बेइजिङ सेराटन’ मा भोजपुरे विष्णु मगर, ४१, को लोभलाग्दो दैनिकी देख्न पाइन्छ । उनी हुन् त्यहाँका एक्जुकेटिभ सेफ । कर्मचारीहरू मात्र ४ सय ६० जना भएको उक्त पाँचतारेमा ४५ प्रतिशत ‘फुड एन्ड वेभरेज’ मा छन्, जसको कमान्ड उनै मगरको हातमा छ ।
जेठो पुस्ता सिकाउँदै कान्छो सिक्दै
म्याग्दीमा लोकप्रिय रहेको ख्याली नृत्य लोप हुन नदिन यहाँका मगरहरू कान्छो पुस्तालाई संस्कृति हस्तान्त्रणमा जुटेका छन ।
यस्ता प्रश्न फेरि–फेरि दोहोर्‍याएर सोधिनेछन् र सम्भवत: यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कहिले पनि आउने छैन् । ‘रक एन्ड रोल’ जीवनशैली अपनाउने अधिकांश प्रसिद्ध गायक गायिकाको जीवन आफैं किन छोटो हुन्छ ?
मार्च २०, २०१४ । बंगलादेश स्थित चित्तागोङको जाहुद अहमद चौधरी रंगशाला । विश्व ट्वान्टी–२० मा नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेल खेलिरहेको थियो ।
ठूला टिमलाई चुनौती
स्पेनी महारथी रियल म्याड्रिड ६ अप्रिल, २०१६ मा च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा उल्फबर्गसँग २–० ले हारेपछि अपराजित रहेको थियो ।
साठी वर्षअघिको सिंहदरबार कब्जा
२००८ साल माघ ४ गते भूगोलपार्कमा भाषण गरेपछि रामप्रसाद राईलाई सरकारले गिरफ्तार गर्‍यो । सुरुमा हनुमानढोका र भोलिपल्ट भद्रगोल जेलमा थुनियो । छोरा मानबहादुर राई भन्छन्, ‘भूगोलपार्कको भाषण सकेपछि राति बुबा र म सँगै आयौं ।
‘संविधानको समीक्षा खोइ ?’
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिएपछि केही समय त के गर्ने भन्नेमै बित्यो । केही दिन घरको मर्मत–सम्भारमा बिताएँ ।
क्लाइमेक्स अर्थात् नयाँ सुरुआत
पटक–पटकका केटी देखाउने/हेर्ने कार्यक्रम भएपछि उही बाचाल अर्थात् ‘गुगल सर्च इन्जिन’ सँग मेरो विवाह लगभग पक्का भयो । अब कुरो मिलिसकेपछि ‘शुभकार्यमा किन ढिलाइ’ भन्दै एक हप्तापछि नै बिहे छिन्ने दिन तय गरियो ।
मैले परिवारका सबै सदस्यहरूलाई वरिपरि राखेर सुनाए, ‘म किताब लेख्दै छु ।’ खासमा म यो खबर विशेष उत्सवमा सुनाउन चाहन्थें ।
इन्टरनेटको यो युगमा धेरैले आफ्नो दिनचर्याको अभिन्न अंग कम्प्युटर, ल्यापटप, टयाबलेट, फयाबलेट र आईफोनसहित स्मार्टफोनलाई बनाएका छन् ।
प्रिय छोरी !
कस्तो छ आजकल?
कटारीबाट हिंडेका थियौं । हिंड्दाहिंड्दै ठाँटीमा रोकियो हाम्रो यात्रा । पहिरोले बाटो बन्द थियो । मैले सहयात्रीसँग सोधें, ‘कति बेला पुगिन्छ हलेसी ?’ उनले जवाफ दिए, ‘खोइ के भन्न सकिन्छ र ? पहाडको उकालो बाटो । लाग्ला कि अझै चार घण्टा ।’
चोरिएको पुस्ता !
नेपाल दसैंमा रंगिइरहँदा आफ्नोचाहिँ अस्ट्रेलिया भ्रमणको मिति थियो । ठूला सडक, अनुशासित मानिस, अधिकतम डिजिटलाइज्ड संरचना, समयलाई पछयाउने सबैको बानी, कामलाई सम्मान गर्ने साझा नीति सुरुवाती चरणमा मेरो मानसपटलमा घुसेका अस्ट्रेलियाका केही बिम्बहरू हुन् ।
विश्व पुस्तक मेलाका अनुभूति
नयाँ दिल्लीमा गत आइतबार समपन्न ४४ सौं विश्व पुस्तक मेलाले अयोजकहरूलाई नै अचम्ममा पार्‍यो । पहिलो, आहिलेको नयाँ ‘डिजिटल’ पुस्ताले स्मार्ट फोन, ट्याबलेट, किन्डल रिडर र ल्यापटपमा पढ्ने बानी बसालेकाले भौतिक रूपमै छापिएका पुस्तकप्रति चासो कम हुँदै गएको विश्लेषण गलत साबित भयो ।